Nekusimbiswa pane zvakavanzika. Iyo Session mameseji mutengi | Linux Vakapindwa muropa
Nekusimbiswa pane zvakavanzika. Session forogo yeChiratidzo ine zvinonakidza maficha
chiitiko es meseji mutengi ine kumagumo-kune-kumagumo kunyorera. Izvo zvakanaka kudzivirira kutapurirana kwemetadata ine ruzivo rwakanyanya.
Kuvanzika kunotanga nekunyoresa. Kusiyana nedzimwe sarudzo hazvidiwe kupinda nhamba yefoni. Ingotinya pa Create Account mushure mekumisikidza icho kuitira chirongwa kuti chigadzire yakasarudzika musangano ID.
Mushandisi wega wega anongofanirwa kugovana yavo ID yedhisiti neiye wavanoda kuwedzera. Iyo inogona zvakare kugovaniswa muQR kodhi fomati.
Session inobvumira anotevera marudzi ehurukuro:
0.1 Chikwata cheboka
0.2 Izwi rezwi
0.3 Kugovera faira.
1 Nekusimbiswa pane zvakavanzika. Aya ndiwo mashandiro eSession
Iyi sarudzo ine ma modes maviri. Yakavharwa chat kune vanosvika vanhu gumi, uye isina muganho yakavhurika chat.
Vagadziri vanovimbisa zvakafanana zvakavanzika maficha.
Session inogona kushandiswa kuchinjanisa marudzi ese ezvinyorwa nemifananidzo.
Nekusimbiswa pane zvakavanzika. Aya ndiwo mashandiro eSession
Nhaurirano muSession dzakavharidzirwa kumagumo-kumagumo, sedzimwe meseji dzakavanzika. Nekudaro, mutsauko ndewekuti muSession, zvitupa zvevanhu vari kutaurirana zvinochengetedzwa.
Iwo mameseji vanotumirwa kwavanoenda kuburikidza nehutongi hwehutongi hwehutongi hwakafanana neTor (nemamwe misiyano yakakosha), uchishandisa sisitimu inoshevedzwa nemaneja ayo hanyanisi (Onion mune yekutanga). Hanyanisi zvikumbiro zvinodzivirira mushandisi zvakavanzika nekuona kuti hapana wega server anoziva mavambo uye kuenda kweshoko.
Anonion routing network inetiweki yenzvimbo dzinoshandiswa nevashandisi kutumira mameseji asingazivikanwe akavharidzirwa. Onion routing network inonyora mameseji ane akawanda materu e encryption, wozozvitumira ku kuburikidza nhevedzano yenzvimbo. Node yega yega "inosunungura" (decrypts) chidimbu chekunyorera, zvichireva kuti hapana node yega yega inomboziva zvese kwairi kuenda uye nekwakabva meseji. Session inoshandisa eiii nzira yekuona kuti sevha inogamuchira meseji haimboziva iyo yekutumira IP kero.
Kana meseji yagadzirwa, inotungamirwa kuSwarm yeanogamuchira. Boka iboka reSevhisi Node dzinoona nezvekuchengeta mameseji kwenguva pfupi kumugashiri kuti aadzose gare gare.
Boka rose muunganidzwa we5 kusvika ku7 Service Node inoona nezvekuchengetedza mameseji enzvimbo yakatsanangurwa yezvikamu zveID. Ivo vanovimbisa izvozvo mameseji anodzokororwa pamaseva mazhinji pane network, kuitira kuti kana Service Node ikaenda kunze kwenyika, haina kurasika. Nenzira iyi, Session's decentralized network yakanyanya kusimba uye nemhosva inoshivirira.
Iwe haugone kutaura kuti Session inoshandisa vezera-kune-vezera tekinoroji kubvira vatengi havaite senge node pane network, uye havaendese kana kuchengeta mameseji kubva kune vamwe vatengi. Iyo modhi iri padyo nekombiki-server dhizaini, uko Session application inoshanda sevatengi uye swarm yeService Node inoshanda sevha.
Iko kunyorera kunotsigirwa neiyo Loki Project. Iyi purojekiti inotsigirwa neasina-purofiti chinzvimbo chinonzi Fundación Loki. Iyo hwaro inopa vashandisi maturusi ekudyidzana online nenzira isingazivikanwe, yakatemerwa, yakachengeteka uye yakavanzika nzira.
Iyo Loki Foundation, seinotarisira chirongwa ichi, inoona izvozvoe kana paine kugamuchirwa kwekutongwa, zvaisazove mukana wekuburitsa mazita evashandisi nekuda kwekuti iwe haukwanise kuwana iyo data inodiwa kuti uite kudaro. Iyo chikamu cheakaundi kusika haishandisi kana kuda email kero kana nhamba dzefoni. ID dzeSession (dzinova makiyi eruzhinji) dzakanyorwa, asi hapana chinongedzo pakati pekiyi yeruzhinji uye kuzivikanwa chaiko kwemunhu, uye nekuda kweiyo Session yakatemerwa network, hapana zvakare nzira yekubatanidza ID ID kune yakatarwa IP kero. .
Kunyanya iyo Loki Foundation inogona kupa, kana ikamanikidzwa kuzviita, ingangove ruzivo rwekushomeka senge matanda ekupinda kune iyo Getession.org webhusaiti kana huwandu hwakaunganidzwa nezvitoro zvekushandisa zvemafoni nhare.
Session inowanikwa yeWindows, Linux, Mac, uye nhare mbozha
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nekusimbiswa pane zvakavanzika. Session forogo yeChiratidzo ine zvinonakidza maficha
Basa rinoitwa neVia Libre rinoyemurika, hazvisi zvinowirirana here kuti vanoshandisa makomputa emakambani seTW YT, panzvimbo yemahara emahara, anoremekedza zvakavanzika?
GitHub account dzakabiwa kuburikidza nekurwiswa kwepishing